TAARIIKH MADAW: Kadib Kaadhkii Casaanka Ahaa Ee Sergio Ramos, Wax Ka Ogow Rekoodhka Taariikhda Xun Ee Ramos Loo Diwaan Galiyay-Miyuu Kulanka El Calsico Seegi Doonaa? - GOOL24.NET
TAARIIKH MADAW: Kadib Kaadhkii Casaanka Ahaa Ee Sergio Ramos, Wax Ka Ogow Rekoodhka Taariikhda Xun Ee Ramos Loo Diwaan Galiyay-Miyuu Kulanka El Calsico Seegi Doonaa?
Kabanka kooxda Real madrid ee Sergio Ramos ayaa kaadhka cas loo diwaan galiyay taariikh xun oo aanu abid ciyaartoy kale soo gaadhin kadib markii kaadhka cas loo taagay dhamaadkii kulankii FC Girona. Sergio Ramos ayaa rekoodho gaar ah looga diwaan galiyay kaadhkii casaa ee uu Bernabeu ku qaatay.
Sergio Ramos ayaa kaadhka digniinta ah la siiyay intii ay socotay ciyaartii FC Girona wuxuuna markaas u muuqday mid helay wixii uu doonayay oo ahaa in uu qaato kaadhkiisii digniinta ahaa ee shanaad si uu u seego kulanka Levante ee La liga isla markaana uu ugu sii meel banayso kulanka El Clasico-da ee Barcelona.
Laakiin Ramos ayaa kaadhka labaad ee dingiinta ah la siiyay dhamaadkii kulankii Bernabeu waxaana loo raaciyay kaadhkii labaad ee digniinta ahaa taas oo keentay in kaadhka cas loo taagay wuxuuna hadda si rasmi ah u seegi doonaa kulanka Levante laakiin miyuu kulanka El Clasico-da seegi doonaa?
Jawaab sharci oo laga bixiyay sharciga horyaalka La liga ayaa lagu cadeeyay in Sergio Ramos uu seegi doono kulanka Levante taas oo ah in uu qaataay kaadhka cas laakiin waxa uu wali sii haysan doonaa afar kaadh digniin ah maadaama oo labadii kaadh ee digniinta ahaa ee kulankii Girona loo xisaabiyay hal kaadh casaan.
Sidaa daraadeed, Ramos waxa uu seegi doonaa kulanka Levante wuxuuna diyaar u noqon doonaa kulanka Barcelona laakiin haddii uu kulanka Barcelona kaadh digniin ah qaato waxa uu markale kaadhka shanaad ee digniinta ah uu ganaax ku seegi doonaa kulanka Real Valladolid.
Haddii aan intaas ku soo dhaafno kala cadaynta sharci ee xaalada uu Sergio Ramos ku dhex jiro, aan ku soo laabanahoy xogtii layaabka lahayd ee uu kaadhka casaanka ah ku mutaystay. Sergio Ramos ayaa la siiyay kaadhkiisii 20 aad ee horyaalka La Liga iyo kaadhkiisii 25 aad ee tartamada oo dhan.
Haddaba halkan kaga bogo xogta kaadhadhka casaanka ah ee Sergio Ramos:
1-Ciyaartoyda taariikhda abid ee Real Madrid ugu kaadh casaanka badan.
2- Ciyaartoyga taariikhda abid ee horyaalka La liga ugu kaadh casaanka badan.
3- Ciyaartoyga ugu kaadh casaanka badan Champions league
4- Ciyaartoyga abid ugu kaadh casaanka badan dalka Spain.
5- Ciyaartoyga abid ee ugu kaadh casaanka badan El Clasico-da